Tattoo-runta 'Viking rune', asal ahaan iyo macnaha | Tattoo
Tattoo-runta 'Viking rune', asalka iyo macnaha
ka xaraashka runes vikings waxaa waxyooday futharkkii hore (magaca ka yimid magaca runes-ka ugu horreeya), mid ka mid ah noocyada badan ee alifbeetada runic ee jiray taariikhda oo dhan.
Rune-yada ayaa loo aqoonsan karaa indhaha qaawan iyada oo ay ugu wacan tahay qaabkooda fudud iyo xoogaa cidhiidhi ah, oo ku habboon in lagu dhajiyo dhagax. Marka xigta waxaan ka hadlaynaa macnaheeda.
1 Futharkkii hore
2 Afartan iyo afar runta iyo macnahooda
Xarfaha ugu da'da yar ee runta, oo ay ku saleysan yihiin sawirka 'Viking rune', waxay asal ahaan ka soo jeedaan qarnigii XNUMXaad ee AD. Dhab ahaan, Waxaa la rumeysan yahay in xididdadiisa laga heli karo xuruufta Laatiinka, iyo inay tusaale u noqon doonto tan ay runesku ku qaateen qaabkooda qaab xagasha ah. Foomkan, sidaan soo sheegnay, waxaa loo adeegsaday in lagu xardho ereyada dhagaxa, birta ama qoryaha.
Runtii quruxda badan ee runes waa in aan loo isticmaalin oo keliya abuurista ereyada, laakiin mid kasta oo ka mid ah wuxuu lahaa fikrad la xidhiidha oo laga soo qaatay saddex aag: diinta, dabeecadda iyo deegaanka aadamiga.
Afartan iyo afar runta iyo macnahooda
Ma rabtaa inaad ogaato taasoo macnaheedu yahay rune kasta? Waxaan hoos ku taxnaa:
Fe (fehu): waxay u taagan tahay faro badan iyo ilaahnimada Frey
U (uro): dibiga, xoogga
Þ (þurisaz): wuxuu u taagan yahay onkodka iyo ilaahiisa, Thor
An (ansuz): ilaaha Aesir
Ra (raido): safarka
Ka (kaunan): Toosh
Ge (gebo): hadiyad
Wun (wunjo): farxad
H (Xagalaz): baraf
Na (naudiz): u baahan tahay
Isa (isaz): baraf qabow
( jēra-): sanad wanaagsan, goosasho
Iwa (iwaz): yew
Þ (perþ): kadiba
Al (algiz): ilaalinta
So (sowilo): Sol
Ti (tiwaz): ilaaha Tyr
Man (mannaz): nin
Lagu (laguz): harada
Ing (ingwaz): ilaaha Ingwaz
Þ (oþila): dhaxalka, hantida
Daga (dagaz): irridda
Tattoo-yada 'Viking rune' waxaa lagu dhiirrigeliyaa alifbeeto ay ka buuxaan macno xiiso badan. Noo soo sheeg waxa aad u malaynayso faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh xarfo » Tattoo-runta 'Viking rune', asalka iyo macnaha
Joker, tattoo caan ah ugu caansan